Fonon-tànana mitondra hoditr'ondry vehivavy tsy misy sarony
Vehivavy mitaingina fonon-tanana. Vita amin'ny hoditra malefaka sy azo zakaina, ny fonon-tànana dia miavaka amin'ny lavaka knuckle, fehin-tànana misy fanidiana ny rojo Viscose. Mora ampiasaina. Ny hoditra mihosotra sy ny lamosina misy rivotra dia manome fofonaina sy fihoaram-pefy ambony ho an'ny tananao.
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry miaraka amin'ny bokotra dimy ao an-damosiny
Vita amin'ny hoditr'ondry malefaka sy mateza, ahazoana aina be tokoa, mora ampiasaina amin'ny tànana. Ho an'ny asa, hariva, na fitafiana isan'andro!
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry misy andian-tànana 2 eo an-damosina
Ho an'ny asa, hariva, na fitafiana isan'andro! Ity fonon-tànana ity dia vita amin'ny hoditr'ondry malefaka sy maharitra, Tena ahazoana aina miaraka amin'ny fametahana malalaka sy mora ampiasaina, ny fehin-tànana be zorony, kofehy tanana 2. Toa tsara tarehy sy mahafinaritra. Ity fonon-tànana ity dia mitafy tsara tarehy mandritra ny taona maro ary hanohy hanompo anao isaky ny vanim-potoana.
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry misy andian-tànana telo
Fomba mahazatra, vita amin'ny hoditry ny ondrilahy malefaka sy mateza, miaraka amin'ny firakofana landy, ary ny lamosina feno fatotra telo amina fanjairana tanana., Toa tsotra sy mahafinaritra izy io. Manomeza fahatsapana tsara amin'ny fotoana tsy mahazatra!
Fomba mahazatra, vita amin'ny hoditry ny ondrilahy malefaka sy mateza, miaraka amina fantsom-bola, ary ny lamosin'ny lambam-bolo, toa tsotra sy matsiro izy io. Manomeza fahatsapana tsara mandritra ny fotoana maro manomboka amin'ny mahazatra ka hatramin'ny akanjo!